Abuukar Cumar Caddaan “Al-Shabaab dadka ay dilayaan iyo kuwa ay qarxinayaan kuma taageersani” – STAR FM SOMALIA
“1960 markii xornimada la qaatay islaamka waa laga jeestay, waxaa dhacday cadaalad xumo, been iyo in hantida dadka la xoogo, anaga muslim ayaa nahay, waa inaan ku dhaqnaa shareecada islaamka”ayuu yiri Abuukar Cumar Caddaan oo sheegay in aanu qarsan doonin aragtidiisa, isla markaana mar walba isaga la eedeeyo, fulayna aanu xantiisa moogeyn.
Xaaji Abuukar Cumar Caddaan ayaa sheegay in waxa uu isaga sugayo uu yahay cid si dhab ah kitaabka ugu dhaqanta.
Waxaa uu sheegay in isaga uu la aamusi waayay dhibaatada dalka ka jirta, isla markaana aanay dalka anfaceyn Lix madaxweyne maamul goboleed oo mar walba Itoobiya looga yeerayo, ayna jirin qof ka shaqeyneyso qaranimada sida uu yiri.
Ganacsade Abuukar Cumar Caddaan ayaa lagu tilmaamaa inuu ka mid ahaa Ganacsatadii ugu tunka weyneyd ee Koofurta Soomaaliya, isagoo taageeray Midowgii Maxkamadaha Islaamka ee sanadkii 2006 ka saaray gobolada koofurta iyo bartamaha Soomaaliya Hoggaamiye kooxeedyadii dalka ka jiray.
Hoolgal balaran oo ay sameeyeen ciidamada dawlada ayaa dad badan lagu soo qabqabtay